Blind / aasay Via - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Vias, in uu yahay, copper plated godad, ka ciyaaraan door muhiim ah ee isku dhexeeya lakab ee guddiga circuit ku daabacan. Guud ahaan, vias in PCBs loo kala qaybin karaa qaybaha soo socda: iyada oo-dalool via, indha la 'via oo lagu aasay via. vias Blind / aasay si ballaaran codsatay in SMT (dhulku Mount Technology) oo kaliya in ay mag-darrada vias dhex-dalool.
Blind via xira mid daaha dibadda iyo mid ama ka badan layers hoose ee guddiga circuit ku daabacan, mas'uul ka ah isku dhexeeya lakabka sare iyo layers hoose ama lakabka ugu hooseysa iyo layers hoose.
vias aasay xirmaan layers hoose oo kaliya gudaha guddiga circuit ku daabacan si ay u yihiin la arki karin oo kaliya ka muuqaalka dibadda ee PCB ah tan iyo markii ay gudaha ku jira "aasay".
vias Blind / aasay isaga waafaqsanaynina, si horumar cufnaanta oo looxyada aan baahida loo qabo in la kordhiyo tirada of layers ama size guddiga. Sidaa darteed, vias indha la '/ aasay waxaa sida caadiga ah laga codsadaa in PCBs HDI. Ku rid si kale, vias indha la '/ aasay laga soo qaadi karaa marka aad la il daran looga baahan yahay dhagan oo meel bannaan oo xadidan oo dhex-dalool mashaakil.
Maaddaama ay waayo-aragnimo our ka badan 20 sano in industry this, PCB Wonderful takhasusay PCBs saarka la vias indha la '/ aasay. Labada injineerada iyo warshadaha qalabka ka PCB Wonderful loo xaqiijiyo awoodooda buuxda our in kulan shuruudaha indha la '/ aasay via technology.
Illaa hadda, waxaan ku jirnaa karti u leh mashiin qoday iyo laser qoday xal. Marka ay timaado in qodista farsamo, via safafka dhexroor ka 0.2mm si 0.4mm halka 0.1mm for qodista laser.
Iyada oo ku saleysan shuruudaha aad mashruuca ee, waxaad dooran kartaa dhexroor daloolin baahisey in alaabta halka helitaanka oraah ah dagdag ah loogu talagalay PCBs. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan vias indha la '/ aasay, waxaan had iyo jeer tahay heli karaa wonderful@wonderfulpcb.com .